ကယ်လီဖိုးနီးယား ဒေသမှာ ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ Kia Carnival ! – MyMedia Myanmar
ကယ်လီဖိုးနီးယား ဒေသမှာ ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ Kia Carnival !
Kia ရဲ့ နာမည်ကြီး Sedona အမျိုးအစားကို အခုအခါမှာ Kia Carnival အဖြစ်နာမည် ပြောင်းကာ ဆက်လက် ပွဲထုတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘက်စုံ သုံးနိုင်မယ့် ယာဉ်တစ်စီး အဖြစ် Kia ဘက်ကနေ ပုံဖော် ဖန်တီးထားတဲ့ အဆိုပါ ကားအသစ်ကို ဆိုရင် 2022 Model အနေ နဲ့ ကြိုတင်ပြီး မိတ်ဆက်မှု အချို့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုဆိုရင်တော့ Korean Car Blog ရဲ့ ဖော်ပြချက် ကနေ တစ်ဆင့် အဆိုပါ ကားအသစ်ကို အမေရိက မြေပေါ်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ထောက်လှမ်းတွေ့ ရှိလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ထဲမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မြင်ရတဲ့ ပုံထဲက ကားရဲ့ အနောက်ဘက်က တံဆိပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ခေါင်းမရှုပ်သွားဖို့တော့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဆိုပါတံဆိပ်ဟာဆိုရင် Sedona လို့သာနာမည် တပ်ထားတာကြောင့် ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လည်း ခန့်မှန်းလို့ရတာ တစ်ခုကတော့ အခု မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ ကားဟာ Dealership တွေထံကို မရောက်ရှိ သေးတဲ့ Pre-Production ကား အသစ် တစ်စီး ဖြစ်နိုင်နေပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Kia ဘက်ကနေလည်း အခုကားတင်မကပဲ နောက်ထပ် ကားအသစ်တွေမှာ ဆိုရင် လည်း အမည် ပြောင်းလဲမှုအသစ်တွေ ရှိဦးမယ်လို့ အတည်ပြုထား ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ပြောင်းလဲရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Kia က သူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်တွေကို ပိုမို တိုးမြှင့်ရရှိလို့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ပိုပြီး အာရုံစိုက်ခံ ချင်တယ် ဆိုရင် ကားမော်ဒယ် တွေမှာ မှတ်ရလွယ်မယ့် နာမည် တူလေးတွေ စတင် ဖန်တီးပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ပြောင်းလဲခြင်း ဖြင့်လည်း ကုမ္ပဏီရဲ့ ကားမော်ဒယ်တွေကို မှတ်ရတဲ့ အခါမှ ပိုပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူသွားနိုင်ပါ သေးတယ်။ ဒါဆိုရင် နမူနာ တစ်ခု အနေနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ Mercedes-Benz S-Class ရဲ့ မတူ ညီတဲ့ Version တစ်ခု ရှိနေသေးမယ် ဆိုရင် ဘယ်လို နေမလဲ လို့ စဉ်းစားကြည့်ရင် အခက် တော့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုမြင်တွေ့ ရသလောက်ဆိုရင် Kia ရဲ့ ကားက လမ်းမပေါ် ထွက်ဖို့ အဆင်ပြေနေပြီးလား ဆိုတာစဉ်းစားစရာပါ။ ဒါ‌ပေမယ့်လည်း မဖြစ်နိုင်လောက်‌ ‌သေးပဲ Pre-Production ဘီးတွေ ကိုလည်း တပ်ဆင်ထားတယ်လို့ ယူဆရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တကယ်တမ်း ကား အသစ် အနေနဲ့ ထွက် ပေါ်လာမယ့် အချိန်မှာတော့ Kia ရဲ့ Logo အသစ်ကိုလည်း တပ်ဆင် ထည့်သွင်းလာနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး ကားရဲ့ ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေက တော့ သေချာပေါက် Carnival ဖြစ်ဖို့ များနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ ပုံရိပ်အရတော့ အတွင်းခန်းကိုပါ အနည်းငယ် မြင်တွေ့ရတာ ဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ Caramel Brown Shade ကိုမှ အနက်ရောင်နဲ့ ငွေရောင်သုံးကာ သားရေနဲ့ အလူမီနီယံ တွေကို အချိုးကျကျ ပေါင်းစပ်ပေးထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ လောလောဆယ် Sedonival ဆိုရမယ့် ပုံထဲက ကား အတွက် ကတော့ အင်ဂျင်ပိုင်းမှာလည်း အမေရိက Bound Model အတွက် ခန့်မှန်း လို့ရနိုင်ပြီး Kia ရဲ့ 3.5 Liter V6GDi ကို အသုံး ပြုလာနိုင်ကာ 290 hp နဲ့ 261 lb-ft Torque လောက် အထိကို စွမ်းဆောင်လာနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကား အတွင်း ဝင်ဆံ့မှုကတော့ အနည်းဆုံး ၇ ယောက် ၊ ၉ ယောက် ကနေ ၁၁ ယောက် လောက်အထိ ဖြစ်လာနိုင်သလို အဆိုပါ ကားနဲ့ ပတ်သက် မယ့် အခြား အချက် အလက်တွေမှာလည်း ကားရဲ့ အင်ဂျင်လိုပဲ အမာစား အကောင်းစား ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့် ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆိုပါ ကားအသစ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက် တွေကိုတော့ ဆက်လက် ပြီး ‌စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ကယ်လီဖိုးနီးယား ဒေသမှာ ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ Kia Carnival ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-22T17:30:51+06:30January 22nd, 2021|MYCARS MYANMAR|